एक नयाँ स्विट्जरल्याण्ड मा जानुहोस्: रोबोटहरु द्वारा संचालित होटलहरु लाई कुनै सडक र कारहरु को आवश्यकता छैन, तर लामा, बाख्रा, र सास फेर्ने दृश्यहरु
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » उद्योग समाचार बैठक » एक नयाँ स्विट्जरल्याण्ड मा जानुहोस्: रोबोटहरु द्वारा संचालित होटलहरु लाई कुनै सडक र कारहरु को आवश्यकता छैन, तर लामा, बाख्रा, र सास फेर्ने दृश्यहरु
ब्रेकि European युरोपेली समाचार • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • उद्योग समाचार बैठक • सभाहरूमा • मान्छे • स्विट्जरल्याण्ड ताजा खबर • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा
by इलिसाबेथ ला Lang्ग - eTN मा विशेष
फोटो क्रेडिट: एलिजाबेथ ल्या .्ग
द्वारा लिखित इलिसाबेथ ला Lang्ग - eTN मा विशेष
यो जिज्ञासा, नेटवर्कि opportunities्ग अवसर, व्यापार वार्ता हो जसले होटल व्यवसायीहरु र १०० भन्दा बढी प्रदर्शनी साझेदारहरु लाई ल्यायो, जुन लगभग days०० दिनको शान्त अनुपस्थिति पछि कहिल्यै समाप्त नहुने कोरोना प्रतिबन्धहरु को कारणले होटल उद्योग लाई एकसाथ पूरा गर्दछ।
हाले ५५० ज्यूरिख मा सामान्य glitzy र ग्लैमरस 550 सितारा होटल स्थलहरु बाट टाढा छ, जहाँ शिखर सम्मेलन को यस प्रकार सामान्यतया आयोजित छ।
स्विट्जरल्याण्ड को पहिलो Hotellerie Suisse आतिथ्य शिखर सम्मेलन Hotelrevue, एक स्थानीय व्यापार प्रकाशन द्वारा आयोजित, यस हप्ता ११५२ सहभागीहरु लाई आकर्षित।
घटना डिजिटलकरण र घर कार्यालयहरु को हाम्रो नयाँ संसार मा व्यक्तिगत कुराकानी को महत्व लाई रेखांकित।
हेले २ ज्यूरिख Oerlikon मा एक स्थल हो।
आतिथ्य शिखर सम्मेलन स्विट्जरल्याण्ड मा आफ्नो प्रकार को पहिलो कोविड १ 19 को मार्च २०१० मा एक महामारी बनेको थियो
आगन्तुकहरुलाई सुरक्षित राख्न को लागी, सबैलाई एक खोप प्रमाणपत्र (हरियो पास) देखाउनु पर्ने थियो। खोप नलागेकाहरुको लागी, एक नकारात्मक COVID-19 परीक्षण आवश्यक थियो।
हैरानी को कुरा छ कि मास्क नीति हेल ५५० मा चेकपोइन्ट को माध्यम बाट पारित गरे पछि। यो डाक्टरहरु लाई एक सानो शंका थियो तर सहभागीहरु धेरै खुसी थिए।
सास फेर्न को सट्टा मास्कलेस - गति संग धुन मा।
"बेटर टुगेदर" आफ्नो उद्घाटन भाषणमा होटललेरीका राष्ट्रपति एन्ड्रियास जुलिगको क्रेडो थियो।
"हामीले नयाँ पोस्ट महामारी महामारी रणनीतिहरु को विकास गर्न को लागी आवश्यक छ, जसरी हामीले रचनात्मक विचारहरु संग संकट व्यवस्थापन लाई हातमा लिएका छौं। होटल व्यवसायीहरु र उद्यमीहरु को रूप मा, हामी नेताहरु मात्र होइन, तर जो रुझान र सम्भावनाहरु को भावनाहरु लाई चिन्छन् र दूरदर्शिता संग कार्य गर्दछौं।
स्विस पर्यटन महामारी पछि कस्तो देखिन्छ?
तर के आतिथ्य उद्योग, एयरलाइन्स, र पर्यटन उद्योग साँच्चै चाहिन्छ आशावाद को एक वाक्यांश हो।
त्यहाँ नवाचार र डिजिटलाइजेशन को बारे मा धेरै कुरा भएको थियो, तर सहभागीहरु के साँच्चै चाहन्थे?
चेक-इन को लागी एक रोबोट?
यो पहिले नै भूतकाल हो र धेरै बर्ष पहिले चर्चा गरीएको छ। हामीलाई वास्तवमा हाम्रो पोस्ट महामारीको संसारमा के चाहिन्छ?
सबै थुप्रै लकडाउन पछि घरमा बस्नु पर्ने बाध्यता एक अँगालो हो।
आगन्तुकहरुलाई अँगालो दिनुहोस्!
यात्रुहरुलाई पहिले भन्दा धेरै एक ठूलो मुस्कान र स्वागत मा एक न्यानो स्वागत को आवश्यकता छ यो जति सरल छ।
जे होस्, एक वास्तविक नवीनता रोबोट minibar थियो (रोबोटाइज, जर्मनी द्वारा) अतिथि कोठा मा सीधै वांछित पेय ल्याउने।
मेरो प्रश्न यो रोबोट को लागत कति हुनेछ?
सरल जवाफ एक रोबोट एक वेटर को रूप मा एक नै लागत थियो।
तर यो उच्च ज्याला को स्थानहरु बाट फरक हुन सक्छ कि स्विट्जरल्याण्ड मा भुक्तानी गरीएको छ कम लागतका देशहरु मा भुक्तानी गरीएको छ, जस्तै एशिया मा।
तर के यो अनमास्ड रोबोटहरु आएर महामारी को बेला तपाइँको पेयहरु को सेवा गरीरहेको छ, चुपचाप फेरि ब्याट्रीहरु लामो समय सम्म छोडेर राम्रो छ?
Speakers४ वक्ताहरु संग प्यानल छलफल मा माइक्रोफोन ले आतिथ्य शिखर सम्मेलन २०२१ का प्रमुख तत्वहरु थिए
पर्यटन सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ, उर्स केसलर, सीईओ जंगफ्राउन बहनन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार कहिले फर्कने भन्ने बारे एक छलफल मा टिप्पणी।
त्यहाँ कुनै पूर्वानुमान छैन।
पछिल्लो बर्ष (२०२०) बाट स्विस घरेलु बजार घटेको छ।
स्विट्जरल्याण्ड फेरि विदेश जाँदैछन्। जे होस् स्विस पर्यटन जर्मनी, बेल्जियम, र युएई बाट उत्कृष्ट संख्या प्राप्त गरीरहेको छ।
महामारी भन्दा पहिले, स्विट्जरल्याण्ड मा एशिया को आगन्तुकहरु द्वारा कब्जा पाहुना कोठा को 70% भन्दा बढी थियो।
ओलम्पिक खेल पछि चिनियाँ आगन्तुकहरुको फिर्ता निर्णायक हुनेछ। स्विट्जरल्याण्डको एशिया मा अर्को बर्ष को लागी दुई आशाजनक परियोजनाहरु छन्। स्विस पर्यटन चीन, भारत, दक्षिणपश्चिम, र दक्षिण पूर्व एशिया मा आधारित प्रचारक स्टाफ छ। भित्रीहरुका अनुसार त्यस क्षेत्रबाट पर्यटनको ठूलो माग छ।
भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, र ब्राजिल जस्ता बजारहरु फिर्ता आउनेछन्। पक्का भारत स्विट्जरल्याण्ड को लागी एक खेल परिवर्तक हुनेछ। तर खोप अत्याधुनिक र सजिलो भिसा प्रशोधन संग संयुक्त मुद्दा हो।
Halle 550 ज्यूरिख मा: आतिथ्य शिखर सम्मेलन को स्थान
हामी गैर खोप द्वारा एक तानाशाही मा बाँचिरहेका छौं स्विस इन्टरनेशनल एयरलाइन्सका सीईओ डिएटर भ्र्या says्क भन्छन्: हाम्रो केबिन क्रुको 90 ० % खोप लगाइएको छ तर हामीले खोप नलागेकाहरुको हेरचाह गर्नुपर्छ।
लगातार परिवर्तन स्थितिहरु जब यात्रा एक ठूलो समस्या हो। खोप एक ठोस स्थिति हासिल गर्न को लागी प्रमुख टिकट हो। धेरै उडानहरु खाली छन्, तर क्वारेन्टाइन हट्ने बित्तिकै - बुकिंग कुनै समय मा आसमान छ।
सौभाग्य देखि हामी धेरै भन्दा धेरै समूहहरु संयुक्त राज्य अमेरिका बाट आउँदै छन्। अमेरिका बाट पाहुनाहरु को मात्रा महामारी भन्दा पहिले जस्तै उच्च छ।
तर हामी अझै पनी अमेरिका को यात्रा गर्न सक्दैनौं, र हामी लामो समय को लागी संयुक्त राज्य अमेरिका को यात्रा बिना जान सक्दैनौं। कार्गो उडान बिना, हामी हाम्रा अमेरिकी मार्गहरु को आधा मा खाली उडानहरु हुनेछ।
ब्यापारिक उडानहरु बिस्तारै सुचारु हुनेछन् तर हामी २०२३ सम्म ३० % को माइनस को आशा गर्दछौं। हामी २०१ in मा ५३ मिलियन नाफा कमाउने रेकर्ड वर्ष थियौं।
वर्ष २०२२ या त सामान्य मा फिर्ता हुनेछैन- तर यूरोप विकास भैरहेको छ; संयुक्त राज्य अमेरिका मा दोस्रो स्थान र तेस्रो स्थान एशिया Vranckx बताउँछ। हामी एक स्थिति मा छौं जहाँ हामी धेरै नवीनता मा राख्न सक्दैनौं।
विमानको भाडा स्थिर रहनेछ, स्विसका सीईओ Vranckx भन्छन्।
आतिथ्य शिखर सम्मेलन २०२१
जबकि स्विट्जरल्याण्ड पर्यटन को निर्देशक मार्टिन Nydegger, सबैलाई यसो भन्दै बिन्ती गर्दै छन्: "खोप लगाउनुहोस्, यो राम्रो छैन तर महत्वपूर्ण छ।" हामीसँग हाम्रो क्षेत्रमा पर्खने समय छैन। ओभर टुरिजम सकियो।
Nydegger विश्वस्त छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय बजार २०२३ सम्म फिर्ता आउनेछ। स्विट्जरल्याण्ड आगन्तुकहरु को लागी एक प्रीमियम देश हो। यो गुणस्तर छ, यो मार्केटि of को एक प्रश्न होइन।
MICE ब्यापार को लागी, २०१ season को सिजन एकदमै समाप्त भयो।
त्यस्तो केहि बाँकी छैन र हामी २०२१ मा थोरै ५ % को भोल्युम को बारेमा कुरा गर्दैछौं।
यसले अब कम कर्मचारीहरु लिन्छ।
तर के मुसा व्यवसाय बाँच्न सक्छ?
स्विट्जरल्याण्ड मा MICE होटल उद्योग, बुकिंग।
४ 48% बुकि mobile मोबाइल को रूप मा प्लेटफर्म को उपयोग गरेर मोबाइल को रूप मा गरिन्छ। सम्मेलन होटलहरु पनि अमेजन, वा बैठकहरु को चयन को माध्यम बाट बुक गर्न सकिन्छ, जो बैठक योजनाकारहरुमा एक ठूलो प्रभाव छोड्छ।
वर्ष को होटल पुरस्कार पहिलो पटक Nadja र परी कथा होटल Braunwald (4 तारा) को पेट्रीक Vogel को लागी प्रस्तुत गरीएको थियो।
त्यहाँ नवाचार र डिजिटलीकरण को बारे मा धेरै कुरा भएको थियो, तर यो होटल मा पनी त्यहाँ पुग्न को लागी एक सडक छैन।
Braunwald कार मुक्त छ।
Braunwaldbahn तपाइँ घाटी स्टेशन बाट हरेक आधा घण्टा सम्म लिन्छ। तपाइँ लामास, बकरी द्वारा स्वागत छ जब "गोल्डन बाख्रा पुल" पार।
खुसी गाईहरु, व्यस्त कुखुरा हप्प्लिंग खरगोश, र लुभावनी दृश्यहरु तपाइँ पर्खिरहेका छन्।
किन परी कथा होटल?
एक लामो समय पहिले एक सानो केटी रेस्टुरेन्ट मा ठूलो स्वरमा रोइरहेकी थिईन् र मात्र रोकिन् जब मालिक Fridolin Vogel उनको परी कथा सुनाउने वाचा गरे।
आज सम्म यो परम्परा जीवित छ र Nadja एक Patric Vogel द्वारा हरेक दिन मनाईन्छ। राम्रो लायक! बधाई छ!
इलिसाबेथ ला Lang्ग - eTN मा विशेष